ENWERE M IKE IJIKỌ IGWEFOTO IP SITE NA WI-FI - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Ụnyaahụ m zụtara Vimtag Snowman Wireless PTZ Cloud IP Camera CP1 Igwefoto IP. Taa, amalitere m ịwụnye ya, emere m ya, ọ dị ka ntụziaka ndị ahụ, ebe ọ na-ekwu na ị ga-ebu ụzọ jikọọ igwefoto ma ọ bụ USB ma ọ bụ eriri eletrik. M ejikọrọ ya na USB, wee gaa Wi-Fi. Ihe niile dị mma, igwefoto na-arụ ọrụ, wee gaa otu kilomita abụọ, elele, ihe nile dị anya nke ọma. Mana ọ dị mkpa iji kpochapụ igwefoto site na USB, ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ, ozi "Ngwaọrụ na-efu" pụtara. Kedu ihe mere, gwa m. Ma ọ bụ ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta alụmdi na nwunye, ma ọ bụ m nwere nsogbu na aka m. Maka ịchebe igwefoto naanị na tebụl kọmputa ma ghara inwe ike itinye ya na njedebe nke ụlọ ahụ, mana gịnị mere anyị ji chọọ igwefoto dị otú a?